Matanho ayo Anobatsira Kukuwanira Iwe Mamwe Instagram Anofarira uye Anotevera | Martech Zone
Mavhiki mashoma apfuura, Jenn Lisak akataura naDave - anozivikanwa se Kewiki - nezve nzira dzekutaurirana dzinoonekwa online. Kana usati watevera Kewiki… Nhoroondo yake inofanira kutevera. Iye ave pedyo nechetatu chemamiriyoni vateveri uye zvinoshamisa basa rekuona raanoisa online zuva nezuva zvinotora mweya wako. Dave muenzaniso wakanaka wekuti ungaita sei pa Instagram! Kuedza kwake kuita kwakatungamira kwaari kushanda kutenderera pasirese.
Ehezve, ini zvakare ndiri wenguva refu fan yaDan Zarrella, uyo anowanzo tumira data nemaziso izvo zvinopa maonero akasiyana pane data. Ini ndinowanzo siya mienzaniso yake nemibvunzo yakawanda kupfuura mhedziso - uye ndinotenda ndizvo chaizvo zvaanoedza kuita.
Ini nguva pfupi yadarika ndakaita nguva ndichiunganidza hombe hombe dhatabhesi uye ndichiiongorora kuti ndione hunhu hunoita kuti mifananidzo ishande (kana kusashanda). Mhedzisiro ndeye infographic pazasi. Kana iwe uchida kuziva nezve nerdy ruzivo rweiyo dhatabhesi, pane ruzivo pazasi payo. Dan Zarrella, Iyo Sayenzi ye Instagram
Zvimwe zvezviwanikwa izvi zvinonakidza… sekunge mifananidzo isina kunyatso shandurwa ichishandisa mafirita e Instagram akasiyana garner. Kana kuti kana pikicha yakatumirwa nemamwe ma tag inoshanda. Kunyangwe iyo pikicha yakanyanya kana kushomeka inoonekwa zvakanyanya kana zvishoma Kunyangwe kana kusviba kana yakajeka mifananidzo yakagovaniswa zvimwe. Kana kunyangwe kana kushevedzera-kune-chiito pane tsananguro yako kuchizoguma nekuwana zvimwe zvinodiwa. Mhedzisiro yacho ichakushamisa iwe!
Tags: Dan ZarrellainfographicInstagraminstagram kubatanidzwainstagram inoteverainstagram infographicinstagram inofarirainstagram statsinstagram nzirainstagram maonerokewikisainzi ye instagram
12 Matanho eSocial Media Kushambadzira Kubudirira